कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट वृद्धको मृत्यु - नागरिक रैबार
कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट वृद्धको मृत्यु
कैलाली: कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। भजनी नगरपालिका–६ मा आइतबार बेलुकी मोटरसाइकलको ठक्करबाट सोही नगरपालिका–२ बस्ने ७० वर्षीय भड्डु डगौराको मृत्यु भएको हो।
गम्भीर घाइते भएका डगौराको उपचारको क्रममा स्थानीय अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेलुकी ८ बजे नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलले पैदल हिँडिरहेका बृद्धलाई ठक्कर दिएको हो। मोटरसाइकलसहित फरार रहेका चालकको खोजी भइरहेको छ।
मत संकेत गर्न नसक्ने मतदाताले सहयोगी लैजान पाउने
राजनीतिले दुई चिरामा विभाजित फैती गाउँ, भोज र मलामी पनि बाराबार
ग्यास्ट्रिक सामान्य रोग होइन : डा. दीपेश शाक्य
काठमाडौं । चलनचल्तीको भनाइ छ, ‘ग्यास्ट्रिक नेपालीको साझा रोग हो ।’ खराब वा असन्तुलित खानपान नै यसको मूल कारण हो । ग्यास्ट्रिकलाई धेरैले सामान्य रोगको रुपमा लिन्छन् । जबकि सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने ग्यास्ट्रिकले पेट वा आन्द्राको क्यान्सर नै गराउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । ग्यास्ट्रिक कसरी हुन्छ ? यसको सुरुवाती लक्षण के हो ? […]
बाजुराकी २३ बर्षयि महिलाको उपचारमा समस्या
नागरिक रैबार/बाजुरा १० जेठ। आगोले जलेकि बाजुराकी एक महिला आर्थिक अभाबमा समस्या परेकि छन् । बुढिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० बस्ने २३ बर्षकि लोकशरी कुवर अछामको बयलपाटा अस्पतामा रहेकि छन् । बयलपाटा अस्पताले उपचार सम्भब नभएको भन्दै रिफर गरेको भएपनि पैसा नहुदा अस्पतालमा उपचारमा अभाबमा बेडमै थन्किएछि छन् । जेठ ३ गते घरमै आगाले जलेकी […]
पछिल्लो समयमा केही देशमा देखिएको मंकीपक्स संक्रमण थप देशहरुमा पनि देखिएको छ । अस्ट्रेलिया, इजरायल र स्वीटजरल्यान्डमा मंकीपक्स देखिएको हो । योसँगै मंकीपक्स संक्रमण फैलिने देशको संख्या १५ पुगेको छ । देशबाहिरबाट आएका एक एक जनामा संक्रमण देखिएको इजरायल र स्वीटजरल्यान्डले जनाएका छन् । इजरायलले अर्को शंकास्पद केसको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । मंकीपक्स सजिलै […]
सरुना कोइराला कक्षा–४ मा पढ्छिन् । घरबाट पाँच मिनेटको पैदल यात्रामा नै स्कुल पुगिन्छ । यति नजिक स्कुल हुँदा पनि सधैं अभिभावकले नै ब्याग बोकेर स्कुल पु¥याउनुपर्छ । सरुना आफैं ब्याग बोकेर स्कुल जानै सक्दिनन् । १२ वटा पुस्तक, कापी, पानीको बोतल, खाजा सबै कुरा ब्यागमा राख्दा उनलाई त्यो ब्याग यति धेरै गह्रुँगो हुन्छ कि […]
चुनावको भीडभाडले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्छ ?
नेताहरु घर–दैलोमा पुगेर भोट माग्न आए । मतदानका लागि आह्वान गरे । तर, भीडभाडको कारण फैलन सक्ने कोरोनाको संभावित जोखिमबारे सर्तक गराएनन् । त्यसैले मत हाल्नका लागि भीड त उर्लियो तर स्वास्थ्य सचेतना देखिएन । अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या न्युन छ । ५० को हाराहारीमा संक्रमित छन् । यही कारण पनि कोरोनाप्रति मान्छेहरुमा भय […]